Ubugwenxa booyise ndibuvela koonyana – Isahluko 2 | FunDza
Ubugwenxa booyise ndibuvela koonyana - Isahluko 2
[KungoLwesihlanu uSizwe ufika kubahlobo bakhe uS’busiso kunye no Lindile. Ufika behleli ngaphantsi komthi njengesiqhelo.]
S’busiso: Sizwe ubukeka ungatyhilekanga namhlanje ingaba ikhona into ekukhathazayo?
Lindile: Ukuba ikho into ekukhathazayo thetha mhlawumbi singanceda.
[USizwe ekhwankqisekile kukuva lamagama ephuma ku Lindile no S’busiso.]
Sizwe: Akukho nto ingako. Ndikhathazwa nje kukuphelelwa kuka mama ngumsebenzi, andiyazi ukuba ndizakuzithenga ngantoni izixhobo zezibalo esizakuzisebenzisa eklasini ka titshal’uNgema, ebethe wonke umntu ngoMvulo abe unazo.
Sizwe: Andiyazi nyhani.
[US’busiso ajonge uLindile ancume.]
S’busiso: Ngelixesha besisithi sincede ngokusithengisela eNew Section besinceda wena. Ukuba ubungakhange wale ngowungenaxhala ngoku.
Sizwe: Bendinixelele ukuba andisoze ndithengise ziyobisi mna!
[Aphakame kwindawo ebebehleli kuyo abashiye.]
[uSizwe ngolusuku akhange aye kwithala lencwadi njengoko aqhele ukwenza. Wahlala endlini. ]
Nokhanyo: Kutheni namhlanje awunamsebenzi wesikolo?
Sizwe: Utsho kuba kutheni mama?
Nokhanyo: Kaloku udla ngokufika nje ubeke incwadi uyokwenza umsebenzi wakho wesikolo.
Sizwe: Namhlanje akhange sinikwe msebenzi. Enye into endiyilibalayo, ebethe utitshala zesize ne Mathematic Instrument.
Nokhanyo: Yinto ibixelwe nini leyo?
Sizwe: Siyixelelwe izolo.
Nokhanyo: Kutheni ikungona ndiyivayo mna? Kuba imali ebendinayo ndiyisebenzisele enye ingxaki.
Sizwe: Mama ndisaya eWhite Park kubahlobo bam.
Nokhanyo: Ulijongile phofu ixesha ngoku ufuna ukuya eWhite Park. Futhi usuke wathi phithi yile White Park, yintoni le ingaka eWhite Park?
Sizwe: Abahlobo bam bahlala khona.
Nokhanyo: Ndandithe kuwe yahlukana ne White Park, la ndawo iyingozi kakhulu.
Sizwe: Ndiyakuthembisa mama ndizakubuya kwangethuba.
[Aphume uSizwe aye kudibana nabahlobo bakhe uLindile no S’busiso eWhite Park. Afike behleli kwa Abdullah, enye yevenkile zabantu bangaphandle ese White Park.]
S’busiso: Ey Mr.Siz, usithande ngantoni na namhlanje?
Sizwe: Lento kutheni?
Sbusiso: Awuzange kaloku uke usindwendwele apha eWhite Park.
Sizwe: Hayi, akukho nto. Ndithe nje mandize kunibona.
Lindile: Ingathi awuzanga nje ngozokusibona, thetha mfondini yintoni le ufuna sikuncede ngayo?
[USizwe adukise atshintshe incoko.]
Sizwe: Majita bekunjani esikolweni?
Lindile: Mfondini sutshintsh’incoko, thetha lent’uzengayo.
Sizwe: Eish andiyazi ukuba mandiqale ngaphi.
Sizwe: Into endibeka apha ndifuna nindiboleke imali ndizakutheng’izinto zam zesikolo.
S’busiso: Ndisatsho nangoku, ukuba nje wena ungavuma ukusithengisela eNew Section, awusoze udinge mali yokuthenga izinto ezifunwa esikolweni. Kodwa andithethi lonto, sizakuboleka le mali uyifunayo. Ingaba yimalini le uza kuyidinga?
Sizwe: Xa iyonke yi R200. Iquka nemali yokuthenga ubhaka omtsha.
S’busiso: Imali esinayo yi R100, kodwa enye singayoyithatha ku Ta-Sox.
Sizwe: Ngubani uTa-Sox?
S’busiso: Ngulobhuti simthengiselayo.
Sizwe: Nani kanti niqashiwe? Phofu akukho ngxaki ndizakuyithatha ngomso.
[Kwabe sele kusiwa ubamnyama.]
S’busiso: Akukudanga kwa Ta-Sox, sokukhawuleza masambeni.
Sizwe: Ndizakuza ngomso kuba uyabona ngoku sekurhatyela. Bendithembisile endlini ukuba ndizakubuya kwangethuba.
S’busiso: Kusekusasa nje, akusekho mntu ongangawe ongena endlini ngelixesha, phofu akukho ngxaki noba ungaza nini inye qha into endiyaziyo imali ayizulinda wena.
Sizwe: Akukho ngxaki masambeni ke siye kulo Ta-Sox wenu.
[Bahambe baye kwa Ta-Sox.]
Ta-Sox: Bafana nindiphathele ntoni namhlanje?
Lindile: Ta-Sox size netshomi yethu apha, uSizwe, ufuna imali engange R200 ufuna ukuthenga izinto zesikolo.
Ta-Sox: Uzakuyihlawula ngantoni imali engako? Nimxelele phofu ukuba eyam imali iyazala?
Sizwe: (ebuza ngokukhawuleza) Izala malini?
Ta-Sox: I R50 izala i R25 ngeveki.
Sizwe:(othukile) I- R25 ngeveki! Ndiyaxolisa mna andizukwazi ukuyihlawula imali engako.
Ta-Sox: Akukho ngxaki ikhona enye indlela onokundihlawula ngayo ukuba nje ungandithengisela nje ezi zinto (atsho emnika isingxobo esineziyobisi).
Ta-Sox: Nantsi nalemali ubuze kuyifuna.
[USizwe ayithathe kunye nesingxobo eso.]
Ta-Sox: Ungakhathazeki, uS’bu noLee bazakufundisa yonk’into ekufanele uyazile.
Sizwe: S’bu, ndizakunibona ngomso.
[Abashiye uSizwe aye kowabo.]
Ufika unina, uNokhanyo, sele evutha ngumsindo kuba ebemyalele ukuba abuye lingekatshon’ilanga.]
Nokhanyo: (enomsindo) Sizwe, benditheni ukumka kwakho apha?
Sizwe: Ubuthe ndibuye lingekatshoni ilanga; lithi litshona ndibe sendisendlini.
Nokhanyo: Ngubani ngoku ixesha?
Sizwe: Ndicel’uxolo mama andisokuze ndiphinde.
Nokhanyo: Sizwe ukususela namhlanje andifuni kuphinda ndikuve usithi uya eWhite Park, siyavana?
Sizwe: Ewe mama.
[Ahambe uSizwe ayongena kwigumbi lakhe lokulala. Akuvuka ekuseni, bekumele edibene no S’busiso kunye noLindile. Bathe bevuka kowabo wabe uSizwe sele emkile.]
Nokhanyo: Inokuba uvuke wayaphi uSizwe kuba ayifani naye into yokuvele ahambe nje engaxelanga.
Sisipho: Uthi akayanga kwezitshomi zakhe zase White Park, kuba oko athe watshomana nazo akasenguye la Sizwe simaziyo; ezitshomi zakhe zimtshintshe ingqondo.
Nokhanyo: Kuyafuneka ke ndithethe naye ngemfundiso zetshomi ukuba ekupheleni kosuku zijika zibeyincindi yekhala.
Sisipho: Phofu ubuye nini phezolo?
Nokhanyo: Ubuye ebusuku, into angaqhelang’oyenza phofu.
[Besathetha njalo angene uSizwe sele engxamile, ezokuthatha isingxobo ebesifumene ngezolo ku Ta-Sox.]
Nokhanyo: Yintoni wangena ngathi uyaleqwa?
Sizwe: Ikhona into endiyilibeleyo mama.
[Atsho angqale nqo kwigumbi lakhe lokulala, akhuphe isingxobo eso ngaphantsi kwebhedi aphinde aphume ngokukhawuleza.]
Nokhanyo: Yintoni le ingaka ikwesasingxobo?
Sisipho: Inokuba zizinto zesikolo mama.
Nokhanyo: Xa izizinto zesikolo yintoni lento zifihlwayo?
Sisipho: Ey, nam andazi ke mama.
Nokhanyo: Sisipho mntanam, khawuthi ndiye kuMaNyawuza ,mhlawumbi anganalo icebo ndizokunithengela ezi zinto zenu zesikolo.
[Aphume aye kwa MaNyawuza.]
MaNyawuza: (ephendula unkqo, emnyango) Ngaphakathi! Kanti nguwe Nokhanyo.
Nokhanyo: Ewe Nyawuza ndim.
MaNyawuza: Uphilile phofu?
Nokhanyo: Ndiyaphila akhonto, unjani wena?
MaNyawuza: Nam ndiyaphila; oko sigqibelene akukabikho zintsha. Ingaba isithande ngantoni namhlanje awuleqwa phofu?
Nokhanyo: MaNyawuza ndibekwa ngumcimbi wemali. Abantwana bakhala ngezinto zesikolo, andikafumani nezosentana zam emsebenzini, bendinethemba ukuba ungandibole nokuba yi R300.
MaNyawuza: Ey ntombi, ufike kakubi ke namhlanje mntasekhaya, ndingumph’ochutyiweyo ndikulendawo ndikuyo.
Nokhanyo: Inokuba ndizakuyifumana phi kengoku le mali! Andibaqhelanga nabantu balapha e New Section, akukho nomntu omaziyo na obolekisa ngezalayo?
MaNyawuza: Ukhona umfana ohlala eWhite Park, kuthwa nguSonwabile, kuthwa uyabolekisa ngemali ezalayo. Ndinokusa kuye nangoku.
[Aphume uNokhanyo ekhatshwa ngu MaNyawuza besiya e White park kwa Sonwabile odume ngelika Ta-Sox, beyokubolela imali ezalayo. Xa befika kwa Ta-Sox bafika sele kumzuzu u Sizwe ephumile. Emveni kwethutyana u Nokhanyo uphele evumelana no Ta-Sox ngenzala.]
Nokhanyo: (ebulela xa begoduka) Enkosi kakhulu MaNyawuza, undincedile. Bendabayintoni ngaphandle kwakho!
[USizwe ufika kowabo sele enikwa imali ngumama wakhe yokuba ayokuthenga zonke izinto ezifunwa esikolweni.]
Nokhanyo: Ndizame kwade kwazameka. Thatha nants’imali uyozithengela zonke ezi zinto ubusithi ziyafunwa esikolweni.
[Atsho eyikhupha esipajini emnika.]
Sizwe: Enkosi kakhulu mama.
Ncokola: Ukuba ungazibona usekoneni ungawophula umthetho uthengise iziyobisi? Xhasa impendulo yakho.
Andisoze shame ndizimoshele ubomi
Andisoze ndiyenze lonto ngoba ngalondlela ndizigrumbel umnxuma wencwaba kuba ndingabanjwa
Bendingasokuze ndophule umthetho.kuba bendizophela ndisentolongweni bekungcono ndiyamkele into yokuba akhomali ekhaya
Hai andinozithengisa kuba zikhna eziny indlela ezifana nok xelela utishala umba wakh
*ff1997.MrSbLiNg*+* · 7 years ago
Hai mna andisoze ndithengise iziyobisi if bendngu SIZWE coz uzifak egxakin